Dagaal culus oo ka dhacay Fiidoow - BBC Somali
Image caption ciidammada qalabka sida ee Soomaaliya oo sameynaya gaada ka ciyaar
Wararka ka imanaya deegaanka Fiidoow oo ku yaalla inta u dhaxeysa gobollada Sh/dhexe iyo Hiiraan ayaa sheegaya in halkaasi maanta uu ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Alshabaab.
Dagaalka ayaa sida ay BBC u sheegeen dadka deegaanka waxa uu bilowday markii ciidammada dowladdu ay gaareen Fiidow oo Alshabab ay ku lahaayeen fariisin.
Dadka deegaanka ayaa u sheegay weriyaha BBC ee Muqdisho, Maxamed Ibraahim Macalimuu, in ay maqlayeen hub culus oo ay is weydaarsanayeen labada dhinac, sidoo kale ay meel fog ka arkayeen qiiq iyo holac ka baxayay goobta lagu dagaalmay.
Weli si dhab ah looma oga inta uu la eg yahay khasaaraha dagaalka hase yeeshee dadka ka soo cararay goobta dagaalku waxa ay sheegeen in uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac labada dhinac soo gaaray.
Ciidammada dowladda ayaa waxa ay doonayaan in ay xoog ku furaan wadada isku xirta Sh/dhexe iyo Hiiraan taas oo ay Alshabaab weli ku sugan yihiin.
Alshabaab waxa dhawaan laga saaray magaalooyin badan oo ay gacanta ku hayeen kuwaas oo ku yaalla gobollada Koofurta iyo Bartmaha Soomaaliya.
Ammaanka madaxtooyada waa "la sugay"
21 Febraayo 2014